Rehefa mifady hanina ny haavon'ny glucose amin'ny ra dia ambany noho ny mahazatra ...- Diabetes Talks-Sinocare
Rehefa mifady hanina ny haavon'ny glucose amin'ny ra dia ambany noho ny mahazatra ...
Fotoana: 2019-09-11 Hits: 653
l Midina ambany kokoa izany raha 2.8-3.99 ny fifadian-kanina glucose amin'ny ra
① Ny sandan'ny normal an'ny glucose amin'ny fifadian-kanina tsy diabeta dia eo anelanelan'ny 3.9-6.1mmol / L.
②Ny sanda ara-dalàna an'ny glucose amin'ny fifadian-kanina diabeta dia tokony fehezina eo anelanelan'ny 4.4-7.0mmol / L.
Ho an'ireo marary tsy diabeta: ambany ambany ny sandan'ny glucose ao amin'ny rào (glucose amin'ny ra <2.8mmol / L dia antsoina hoe hypoglycemia). Raha mahatsiaro tsy salama ianao dia makà sakafo kely hanamaivanana azy.
Ho an'ireo marary diabeta: ambany ny glucose ao anaty ra. Na manana horohoro tsy fahatsiarovan-tena ianao, hanoanana, fihomehezana tanana ary soritr'aretina hypoglycemia hafa dia tokony hihinana glucose 15-20 grama na sakafo mamy avy hatrany ianao ary hamerina handinika ny glucose amin'ny glucose 15 minitra aty aoriana. Raha mbola ambany ny glucose amin'ny rà, dia mihinana sakafo mamy 15-20 grama hafa ary zahao indray ny glucose ao anaty 15 minitra aty aoriana. Araho maso raha miakatra ny glucose amin'ny ra. Ny antony mahatonga ny hypoglycemia dia tokony ho azo tsara aorian'ny fiverenan'ny glucose amin'ny glucose ara-dalàna.
Manoro hevitra anao ny misakafo tsy tapaka. Raha tsy afaka misakafo ara-potoana ianao dia tokony hihinana biskuitra, voankazo ary sakafo hafa mialoha. Tokony hiezaka ny hisafidy sakafo maina ianao (toy ny mofo mangotraka, vary sns) rehefa mihinana sakafo foto-tsakafo. Ny fidiran'ny sakafo maina dia miadana, izay afaka mampihena ny fiakaran'ny glucose aorian'ny fiterahana ary mitazona fotoana lava kokoa, ka hialana amin'ny hypoglycemia amin'ny sakafo manaraka. Tokony hialanao koa ny fisotroana tafahoatra sy fisotroana amin'ny vavony foana.
Fanazaran-tena tsy tapaka mety hanampy amin'ny fifehezana glucose amin'ny ra. Tolo-kevitra ny hanao fanatanjahan-tena eo ambany fitarihan'ny matihanina ary mamantatra ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra alohan'ny, mandritra ary aorian'ny fampihetseham-batana amin'ny dingana voalohany amin'ny fanatanjahan-tena. Rehefa ambany noho ny 5.6mmol / L ny sandan'ny glucose ao anaty ra, dia tokony ampiana rano mamy na zava-pisotro mamy alohan'ny fanaovana fanatanjahan-tena ary ialao ny fanazaran-tena amin'ny vavony foana.
Pejy mialoha: Inona no hanina raha mijaly hypoglycemia?
Pejy manaraka: Ahoana no ahatongavan'ny diabeta?